Zvitsva zveMalababa zvekudonha | Bezzia
Zvitsva zveMalababa zvekudonha
Maria vazquez | 09/09/2021 18:00 | Mabhegi, Complements, Shangu
Mushure mekuona kuti isu tanga tisina kugovana Malababa zvirevo newe mugore rapfuura, takada kuzvigadzirisa. Sei? Kusvika pa zvitsva zvekudonha yeiyi dhizaini yemhando yezvigadzirwa zvine hunhu zvakagadzirwa muSpain.
Mabhegi, shangu, zvishongo ... Malababa zvishongedzo Ivo vanokutendera iwe kuti upedze nguvo dzako nekunaka. Zvishongedzo, nenzira, izvo zvinounzwa mumhando dzakasiyana siyana, pakati payo ngamera, bhuruu, isina kusimira, tsvukuruka uye nhema nhema. Tsvaga yavo nyowani dhizaini!
Tinoda kuve nyore kweCata, iyo mitten ine yakatarwa mutsipa, Yakagadzirwa nedehwe regwayana rakashambidzwa rinoratidzira kavha yedu. Chimwe chakakosha asi ichi chemazambiringa-chakafuridzirwa chimwe chine mutsipa wakavharwa uye chitsitsinho chakadzika ndiRamona, zvakare ari pabutiro. Uye kana iwe uchitsvaga kukwirira kushoma, unogona kutendeukira kuna Nicolsa kune iyo yepamusoro vhezheni ine 5,55 cm chitsitsinho kukwirira chaunogona kuona mumufananidzo pazasi mubhuruu.
Masaga akarukwa vagara vari chiratidzo cheiyo firm. Mune ino muunganidzwa mutsva tinovawana vari mushanduro vane hukuru uye hushoma hunyanzvi mune hwuru-hwakarukwa hwemombe. Bhegi rekutenga raOdette, rinoratidzwa pamusoro, nderimwe remafaro edu. Inoshanda, yakakura, yakanaka uye inowanika muanomwe mavara iwe aunosarudza kubva.
Kutsvaga dhizaini inoshamisa? Pikiniki bhegi ingangozvikurudzira ipapo. Izvo, senge yapfuura, rakarukwa bhegi regwayana asi riine zvimwe zvakasarudzika senge chimiro chebhasikiti nezvimedu zvinozvitutumadza nazvo. Inowanikwa mune maviri saizi uye matatu mavara.
Sezvo ini ndakaona iyo Malababa Petals muunganidzwa kekutanga, ndinogara murudo naye. Hongu, ndinoreurura. Ini ndinoda ese aya mhete ane akareruka methacrylate petal motifs anouya mune akasiyana mavhezheni: mapfupi, marefu uye akarembera pamhete yendarira.
Iwe unofarira izvo zvitsva zveMalababa zvekudonha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Complements » Zvitsva zveMalababa zvekudonha